Bhiridhadhi anotaura kechipiri (1-21)
Anotaura nezvemugove wevatadzi (5-20)
Anopa pfungwa yekuti Jobho haazivi Mwari (21)
18 Bhiridhadhi+ muShuhi akapindura achiti: 2 “Muchasvika riini muchingotaura zvakadaro? Ratidzai kuti munonzwisisa, kuti tizotaura. 3 Neiko muchitiona semhuka+Uye setakapusa?* 4 Kunyange ukazvidambura-dambura* wakashatirwa,Nyika ichasara isina vanhu nemhaka yako here,Kana kuti dombo richabva panzvimbo yaro here? 5 Chokwadi chiedza cheakaipa chichadzimwa,Uye rimi remoto wake harizobaki.+ 6 Chiedza chiri mutende rake chichasviba,Uye rambi rake richadzimwa. 7 Nhanho dzaari kukanda nesimba dzadzorwa,Uye zano rake richaita kuti adonhe.+ 8 Nekuti tsoka dzake dzichamupinza mumambure,Achadzungaira achipinda mumambure. 9 Achabatwa nechiteyeso pachitsitsinho;Musungo uchamubata.+ 10 Akateyerwa tambo muvhu,Uye akateyiwa munzira yake. 11 Achavhundutswa nezvinhu zvinotyisa kumativi ake ese,+Zvomudzingirira zvakati name name naye. 12 Simba rake rinopera,Uye njodzi+ ichaita kuti adzedzereke.* 13 Ganda rake rinodyiwa-dyiwa;Chirwere chinouraya chinodya* nhengo dzemuviri wake. 14 Achabviswa mutende rake rakachengeteka,+Oendeswa kuna mambo wekutyisa kukuru.* 15 Vatorwa vachagara* mutende rake;Sarufa ichapararira pamba pake.+ 16 Midzi yake ichaoma iri pasi pake,Uye kumusoro kwake mapazi ake achaoma. 17 Haazorambi achiyeukwa panyika,Uye zita rake harizozivikanwi* mumigwagwa. 18 Achabviswa muchiedza achiendeswa murima,Odzingwa panyika. 19 Achange asina vana kana vazukuru pakati pevanhu vake,Uye hapana achasara achigara paanogara. 20 Zuva rake parinosvika, vanhu vari kuMavirira vachavhundukaUye vanhu vari kuMabvazuva vachabatwa nekutya. 21 Izvi ndizvo zvinoitika kumatende emunhu anoita zvakaipaUye kuimba yemunhu asingazivi Mwari.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “sevanhu vasina kuchena.”
^ Kana kuti “ukadambura-dambura mweya wako.”
^ Kana kuti “akamhine.”
^ ChiHeb., “Dangwe rerufu rinodya.”
^ Kana kuti “mambo werufu runorwadza.”
^ ChiHeb., “Chimwe chinhu chisiri chake chichagara.”
^ ChiHeb., “anenge asina zita.”